Oke Osimiri South China: njirimara, mbido na ụdị ndụ dị iche iche | Netwọk Mgbasa Ozi
South osimiri china
Taa, anyị ga-ekwu maka otu ụdị osimiri nke nwere ụfọdụ njirimara pụrụ iche na nke a na-ahụta dịka nnukwu mmiri. Ọ gbasara Oke Osimiri South China. Ọ bụ ụdị oke osimiri dị na Pacific Ocean na aha ahụ sitere na ndịda China. Mpaghara oke osimiri a dị ihe dịka square kilomita 3.6. Ọ dị na ndịda nke China China.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị gbasara njirimara, nhazi na mkpa nke Oke Osimiri South China.
2 Oke Osimiri South China
3 Nhazi na mmalite
4 Ihe ndi di iche iche nke South China Sea
Ọ bụ ụdị oke osimiri gbara Philippines, Taiwan, Malaysia, Singapore, Indonesia, Thailand, Brunei, Cambodia na Vietnam. N'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ bụ Ọwara Oké Osimiri Taiwan, n'ebe ọwụwa anyanwụ ya, Ala Malen Peninsula na ndịda ya bụ Borneo. A na-ahụta ya nnukwu mmiri ma nwee nnukwu bekee nke nwere ọdịdị elliptical ma nwee ihe karịrị 250 obere agwaetiti, ụlọ akụ, akuku mmiri, atolls na igodo. E nwere ọtụtụ ìgwè nke nnukwu agwaetiti ebe a na-eme ọtụtụ n'ime ha na njem nleta. Ọtụtụ osimiri na-asọba na mmiri nke oke osimiri a, dịka Mekong, Pearl River, Min, Jiulong, Rajang, Pajang, Red, Rio Grande de la Pampanga na Pásig.
Oké Osimiri South China adịghị emighị emi. N'adịghị ka osimiri ndị ọzọ, ebe ha pere mpe, dị omimi karị, oke osimiri a nwere ihe dịka mita 1.212 dị omimi. O nwere ndagwurugwu dọrọ onye nọ n'okpuru mmiri aka na ntị ọ nwere omimi nke 4.300 mita. Mmiri ha na oke osimiri gbanwere na ebe a maara dị ka Straits nke Luzon. Ebe a bụ ọrụ maka ijikọ oke osimiri a na nke Philippines iji bụrụ akụkụ nke ọwụwa anyanwụ Pacific.
Oke Osimiri South China
Ọ bụrụ na anyị enyochaa elu ala na akụkụ dị ha nso, anyị ga-ahụ na mmiri na-adịkarị ọkụ. Okpomọkụ ná nkezi, ha dị ihe dị ka ogo 29 n'oge ọnwa okpomọkụ. Ọ bụ eziokwu na n'oge oge oyi, ọnọdụ okpomọkụ dị iche, mana ha na-eme ya na ogo ole ma ole. A ka na-ele ya anya dị ka otu n'ime oke osimiri kachasị mma. Ọnọdụ okpomọkụ n'oge ọnwa oyi na-adaba na ogo 21, mana ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile na ụkpụrụ nke ogo 27 na mpaghara ụfọdụ. Ugwu ugwu kachasi oyi.
Nnukwu mmiri ozuzo na-emetụta oke osimiri a. Ma ọ bụ na mmiri ozuzo ndị a bụ ndị na-achịkwa ihu ala nke oke osimiri na ifufe na-efe n'akụkụ a. Ọ bụ ihe a na-ahụkarị maka ọtụtụ ajọ ifufe na-etolite n'oge oge ọkọchị. Ọ na-ahuta ka otu n'ime oke osimiri oke osimiri dị na ụwa ma bụrụ nke kachasị ukwuu na ọdịda anyanwụ Pacific Ocean niile.
Nhazi na mmalite
Dịka akụkụ nke Oke Osimiri Pasifik, e si n'oké osimiri a kee Osimiri South China wee mepụta ihe karịrị 750 nde afọ gara aga. N'oge ahụ, e nwere nnukwu kọntinent a na-akpọ Rodinia. A ghaghi iburu n'uche na oke osimiri a di ihe dika nde iri-ano na ise, obu ezie na emeburu ya. Ọ malitere n'ihi ọtụtụ ihe omume tectonic ikekwe mgbe otu mpaghara si na mpaghara ndịda ndịda China ọzọ.
E nwere ụfọdụ ndị ọkà mmụta sayensị na-ewere na mmegharị nke tectonic efere ihe enyemaka nke oké osimiri a nyere malitere ihe dịka 55 nde afọ gara aga. Mgbanwe a bịara sie ike mgbe efere ndị tectonic nke India na Eurasia tectonic plate mekọrọ.
Efere nke mere ka oke osimiri a ọbụna mgbe ọ dị obere bụ n'oge Miocene. Osimiri a na-agbasa ruo mgbe o ruru mgbasa nke oke osimiri iji mepụta eriri ọhụrụ mgbe mgbawa nke eriri ala kọntinent nke Rodinia dị elu. O were ihe dịka afọ 30 iji mepụta. Oké osimiri ahụ dịtụ ntakịrị ntakịrị ntakịrị akpụrụ Age nke mere n'oge Pleistocene.
Ihe ndi di iche iche nke South China Sea
Oke osimiri a juputara na ndu mmiri. E nwere ọtụtụ ụdị azụ bụ akụkụ dị mkpa nke nri nke obodo ndị a niile dị nso n'oké osimiri. N'ime oke mmiri nke Oké Osimiri South China anyị na-ahụ tuna, sardines, azụ asa, makarel na corvina. Otú ọ dị, humansmụ mmadụ na-eme ihe karịrị akarị na ebe ndị a na e nwere ụfọdụ ụdị na-na n'ụzọ na-kpamkpam na-agwụ. E nwere ụfọdụ ụdị dị n'ihe egwu nke mkpochapụ nke ọ bụghị naanị ụdị azụ azụ. Anyị chọtara na nduru mmiri nke oké osimiri na Hawksbill mbe. Nduru abụọ a bara ụba n’oge gara aga, n’agbanyeghi na ọnụọgụ ha pere mpe. A ka nwere ike ịhụ ha n’ebe ụfọdụ mana ọpụrụiche.
Ọtụtụ ụdị azụ azụ shark na-eme ụlọ ha na mmiri a. Fọdụ n'ime ha bụ anụ ọjọọ na-eri anụ dị ka anụ ọhịa na-acha ọcha, azụ shark na anụ ọhịa shark. N’akụkụ mmiri, karịsịa ndị dị n’ebe ndịda nke oké osimiri a, a pụrụ ịhụ ha n’ọmarịcha coral. Na mpaghara ndị ọzọ enwere oke osimiri na ọtụtụ agwaetiti nwere ike inye ebe obibi zuru oke maka ndụ ụfọdụ ụdị nnụnụ dịka gannet na-acha aja aja, tern na-acha uhie uhie na tern ọcha.
Otu uru dị n'oké osimiri a na-enye na otu isi ihe mere ị ga - eji baa ụba na ndụ dị iche iche bụ na South China Sea na o juputara n’onu ala. O nwere ikuku gas nke nwere ike ibu nnukwu mmanụ hydrocarbon na mpaghara dum. Nke a na-eme ka oke osimiri a dị oke mkpa. Naanị ole na ole n'ime agwaetiti ndị anyị kpọtụrụ aha n'elu bụ n'ezie mmanụ na gas na-aba ụba. N’ozuzu, a na-eche na oke osimiri ahụ nwere nnukwu nchekwa. Mmiri ahụ bụ ụzọ dị mkpa nke ụgbọ mmiri agaferela kemgbe ọtụtụ narị afọ.
Ọtụtụ ihe na-eyi oké osimiri ahụ egwu. N'ime ha anyị na-ahụ azụ na-akụ azụ na ụfọdụ saịtị ndị na-ebute mmiri na-emebi arịa dị iche iche nke azụ. Nakwa ọtụtụ mbe mbe nesting saịtị na-emetụta ebe obibi ọnwụ na overfishing. Mmetọ bụ otu nnukwu nsogbu na - emetụta ụdị dị iche iche dị ndụ.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Oké Osimiri South China.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » South osimiri china
Akọrọ ihu igwe